Hebei Woke Metal Zvigadzirwa Co., Ltd.
Yakagadzwa muna1996, dzimbahwe uye kambani mbiri yekutengesa iri mudunhu reShijiazhuang Hebei, chigadziko chekugadzira chiri muHebei Xinhe maindasitiri. Isu tiri bato remakurukota eChina Chekuchengetedza & Distribution Association / Hebei yemazuva ano logistics association uye Hebei ndeyedu yakanyoreswa chiratidzo.
HEGERLS maindasitiri ekuchengetera racks vagadziri vanogona kupa chirongwa chirongwa dhizaini, supamaketi, uye zvigadzirwa zvekuchengetera, uye zvivakwa kumisikidza, mashandiro uye manejimendi vashandi kudzidziswa, zvitengeswa zvakateedzana zvigadzirwa, kuronga bhizinesi, uye mushure mekutengesa sevhisi, e-commerce, nezvimwe. Zvigadzirwa zvedu nemasevhisi yakafukidza mapurovhinzi angangoita makumi matatu epamba, maguta, uye nzvimbo dzakazvimiririra, zvigadzirwa zvinotumirwa kuEurope, America, Middle East, Latin America, Southeast Asia, nedzimwe nyika nematunhu. Kutengesa kwegore negore kweanosvika mamirioni mazana maviri emamiriyoni.
Vashandi vanopfuura mazana matatu, yavo yekugadzira base uye yekuyedza nzvimbo, yekutsvagisa michina, uye timu yekusimudzira, kumisikidza uye mushure mekutengesa sevhisi timu, iine mahunyanzvi epamusoro uye mazita einjiniya epamusoro angangoita makumi matanhatu. HEGERLS maindasitiri ekuchengetera racks vagadziri vekambani yekugadzira base ine nyika yepamberi yekugadzira gungano mutsetse 48. 10 yenyika patent yeredhiyo shuttle ngoro, stacker, nharembozha masherufu, akahwina iyo SGS, BV, TUV, chitupa uye ISO9001 certification.
HEGERLS racking system mupiki akapedza mapurojekiti epamba anosanganisira:
Sinopec yekuchengetera chirongwa, Shanxi YunCang yekuchengetedza & yekuparadzira chirongwa, JiLin Long-Mart yekuchengetedza uye nzvimbo yekuparadzira chirongwa, Anguo Zhengtai Kuchengetedza & nzvimbo yekuparadzira nzvimbo, Beiguo Goup supamaketani emaketani, Guoda cheni nyore zvitoro, Hebei dunhu expressway sevhisi nharaunda nharaunda yezvinhu zviri nyore zvitoro nekuparadzira nzvimbo, maJunlebao dairy ekuchengetera mapurojekiti, nezvimwe.
Sweden SwMart imba yekuchengetera, Chile yekudyara mubato Oscar firiji AS / RS mapurojekiti, Algeria FACTO kuchengetedza projiects, Thailand JM Boka AS / RS mapurojekiti, FX Boka South Africa AS / RS mapurojekiti, AALM kambani UAE AS / RS mapurojekiti. Boka reSouth Africa AS / RS mapurojekiti epamba epamba mukati medanho repasi rose rinotungamira.
Vashandi vanopfuura mazana matatu mukambani medu, nevashandi vepamusoro uye mainjiniya mazita angangoita 60.EGEGER racking system mutengesi vane 2 timu yekutengesa yemusika wekunze nekukunze, uye zvese timu yekugadzira, yekuchengetera mota michina yekutsvagisa uye timu yekusimudzira, kuisirwa uye mushure- yekutengesa sevhisi timu, shanduka-kiyi mashandiro kana chirongwa ndicho chinangwa chedu.
Mune HEGERLS racking system yemutengesi zvigadzirwa zvekugadzira, yepasirese yepasi otomatiki inotonhora kukotama & kutenderera mutsetse, otomatiki inoenderera simbi tambo yekurova michina yekugadzira, otomatiki yekumonera yekugadzira tambo uye yepasirese yepamusoro Switzerland GEMA yekumhara tambo kuve nechokwadi chekutanga-kirasi chigadzirwa mhando.